Sina: Lehilahy iray voasambotra fa nitoraka bilaogy momba ny fitokonan’ny mpamily fiarakaretsaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Janoary 2011 3:40 GMT
Vakio amin'ny teny Français, polski, Nederlands, English
Voalazan'ny NDdaily fa lehilahy iray fantatra amin'ny anarana hoe Atoa. Zhou no voasambotra noho izy nitoraka bilaogy kiritika mikasika ny fitokonan'ireo mpamily fiara karetsaka tao an-tanànan'i Xianning tao amin'ny faritanin'i Hubei tamin'ny 19 Desambra 2010 fa voampanga ho “nikarakara famoriam-bahoaka hanelingelenana ny filaminana ara-tsosialy”. Mbola voatàna any amin'ny polisy foana izy hatreto.
Fahiny Atoa. Zhou dia efa mpamily fiarakaretsaka ary nandray anjara tamina fitokonan'ny mpamily fiarakaretsaka tany amin'ny 2006 tany. Saingy niova asa fanao izy ka lasa mpivarotra fiantohana tamin'ny 2007.
Tamin'ny 16 Desambra 2010, nisy fitokonana goavana nataon'ireo mpamily fiarakaretsaka tao an-tanànan'i Xianning ary tamin'ny 18 Desambra, nitatitra ilay fitokonana Atoa. Zhou tamin'ny alàlan'ny kaontiny fitorahany bilaogy kiritika ao amin'ny Tianya. 17 Teo no fitambaran'ny lahatsoratra nalefany mikasika ilay fitokonana ary ny iray farany dia : “Hatramin'ny 16 Desambra 2010, nisy fitokonana goavana nataon'ireo mpamily fiarakaretsaka tao an-tanànan'i Xianning ao Hubei. Antony nanosika ny hetsika ny fanapahan-kevitry ny governemanta hisintona ny fahazoan-dàlan'ireo fiarakaretsaka izay efa feno 10 taona mahery no nahazoana azy. Io fitokonana io dia mitovy amin'ilay iray nitranga tamin'ny Febroary 2006. Na izany aza, tamin'ity indray mitoraka ity ny polisy dia nisambotra ireo mpamily tena navitrika tamin'ny fandraisana anjara. Ny governemanta manontolo dia nanetsika ny polisy rehetra teto amin'ny tanàna mba hanara-maso sy hihaza ireo mpamily fiarakaretsaka. Ny ambaratonga rehetra tao amin'ny governemanta sy ireo mpitantana ny tanàna, ny faritra ary ny governemantam-paritra dia samy feno fahavononana avokoa nanatanteraka ny andraikiny.
Atoa. Zhou dia nosamborina ny ampitson'io ny 19 Desambra 2010 ary noraofina ny solosainy. Raha araka ny antontan-taratasim-pisamborana, nahiahiana izy ho “nikarakara famoriam-bahoaka hanelingelenana ny filaminana ara-tsosialy”. Hatramin'izao, mbola voatàna ao amin'ny toby fihazonana ao amin'ny distrikan'i Xianan izy.